Ny seranam-piaramanidina Munich dia mitatitra ny tombom-barotra 2018 milanja 150 tapitrisa Euro
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny seranam-piaramanidina Munich dia mitatitra ny tombom-barotra 2018 milanja 150 tapitrisa Euro
Munich Airport dia nitatitra ny taom-piasana nahomby tamin'ny taona 2018 nandritra ny valan-dresaka nataony isan-taona tany Munich: ny fiakarana 3.8 isan-jato ho an'ny mpandeha 46.3 tapitrisa manidina sy miverina avy any Munich, ary ny vokatra azo tamin'ny fidiram-bolam-piaramanidina sy tsy fiaramanidina dia nanapa-kevitra ny fiatraikany amin'ny fitomboan'ny varotra Vondrona, izay - mifototra amin'ny tarehimarika voalohany - dia nahatratra ny marika 1.5 miliara euro voalohany. Ny EBITDA koa dia nirohotra nankany amin'ny avo indrindra hatrany amin'ny 535 tapitrisa Euros. Ny orinasam-piasan'ny seranam-piaramanidina - ny FMG Group - dia nanidy ny taona lasa tamin'ny vola azo taorian'ny hetra (EAT) 150 tapitrisa euro. Ny fikorianan'ny vola avy amin'ny asa dia nihatsara 80 tapitrisa euro ka hatramin'ny 465 tapitrisa Euros. Miaraka amin'ny fananana miliara mihoatra ny 2.2 miliara euro, ny tahan'ny fananana, tamin'ny 41.3 isan-jato, dia nihoatra ny 40 isan-jato voalohany.
Raha ny fijerin'i Dr. Michael Kerkloh, ny filoha sy ny talen'ny seranam-piaramanidina Munich, ny fahombiazan'ny varotra dia vato manorina ho an'ny seranam-piaramanidina vonona sy ho mpifaninana: "Amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola be amin'ny fotodrafitrasa ataontsika dia manome antoka izahay fa ny seranam-piaramanidina Munich - na eo aza ny miakatra ny isan'ny mpandeha - afaka manolotra ny mpandeha rahampitso ny fenitra serivisy manaitra sy traikefa nahafinaritra teo amin'ny seranam-piara. Amin'izay lafiny izay, ny tetikasa manandanja lehibe indrindra ankehitriny dia tsy isalasalana fa ny fanitarana sy ny fanavaozana ny Terminal 1. ”
Natomboka ny asa amin'ny fepetra fanomanana voalohany ho an'ity tetikasa lehibe ity izay eo afovoan'ny seranam-piaramanidina Munich. Rehefa vita, ny seranan-tsambo vaovao nomanina dia hampifandraisina amin'ireo modely A sy B efa misy ary hihoatra ny 320 metatra mankany amin'ny avaratry ny andrefana. Hanana docking space ho an'ny fiaramanidina 12. Ny seranan-tsambo vaovao dia kasaina handeha hiasa amin'ny 2023. FMG dia nanentana 455 tapitrisa euro ho an'ity tetikasa fanitarana ity.
Tsy ny Terminal 1 irery no toeram-pananganana ao amin'ny seranam-piaramanidina Munich. Amin'izao fotoana izao, totalin'ny tetikasa fanitarana 14 dia amin'ny dingana samihafa amin'ny fahavitana ny campus campus. Manomboka amin'ny toeram-piantsonana vaovao ka hatrany amin'ny fanitarana ny làlan'ny lalamby S-Bahn ho an'ny rohy ho avy mankany Erding sy ireo tetik'asa maro samihafa. Tafiditra ao anatin'izany ny fanitarana efatra lalana amin'ny làlana atsinanana ho an'ny seranam-piaramanidina atsinanana sy ny fananganana tetezana fanampiny mankany Zentralallee hiditra amin'ny tranokalan'ny LabCampus amin'ny ho avy andrefan'ny seranam-piaramanidina.
Ny anton-javatra lehibe indrindra ao ambadiky ny fironana mavitrika amin'ny fifamoivoizana ao amin'ny seranam-piaramanidina Munich tamin'ny taona 2018 dia ny fiakaran'ny isan'ny mpandeha amin'ny zotra iraisam-pirenena. Ny mpamily fitomboana lehibe indrindra dia ny fizarana misy ny kontinanta, izay niaina fitomboana 7 isan-jato, noho ny ampahany betsaka tamin'ny fanapahan-kevitr'i Lufthansa hametraka fiaramanidina Airbus A380 dimy any Munich. Ny fiaramanidina lehibe indrindra eran-tany dia manana seza 500 mahery ary nitondra mpandeha Lufthansa 900,000 tamin'ny taona voalohany niasany. Nandray anjara tamin'ny fanavaozana ireo fiaramanidina lava any Munich ihany koa ny Airbus A350. Amin'ny volana jolay amin'ity taona ity dia manana fiaramanidina 15 amin'ireo mpamonjy voina sy tena mangina napetraka ao Munich i Lufthansa. Ny fangatahana mahery vaika eo amin'ny sehatry ny kaontinanta dia nitondra fiakarana iray indray amin'ny salan'isan'ny entana enta-mavesatra ao amin'ny hub Bavarian: Miaraka amin'ny salanisa 77.5% amin'ireo seza rehetra fenoina tamin'ny sidina tonga sy niainga, ny seranam-piaramanidina dia nahatratra ny taha ambony indrindra tamin'ny tantarany.
Ny fironana matanjaka fifamoivoizana dia tsy naneho mariky ny fihenan'ny volana roa sy tapany voalohany amin'ny taom-piasana ankehitriny, miaraka amin'ny isan'ny fakana entana sy ny fidinana an-tanety manodidina ny 3 isan-jato avo kokoa isan-taona, ary ny isan'ireo mpandeha amin'ny 4 isan-jato tena salama.
“Raha jerena mialoha anefa dia tsy maintsy marihintsika fa ny fitomboan'ny tinady ao amin'ny seranam-piaramanidina Munich mandritra ny folo taona ho avy dia tsy misy afa-tsy ny fanitarana mifanaraka amin'ny famatsiana. Ny moratorium amin'ny fanamboarana ny làlambe fahatelo dia nanakana ny fahafaha-mampitombo antsika amin'izao fotoana izao, ”hoy ny Tale jeneralin'ny FMG Michael Kerkloh. Nanampy izy hoe: "Manoloana izany toe-javatra izany, ny asantsika lehibe mandritra ny taona ho avy dia ny hitazomana ny fari-pahalalana sy kalitaon'ny serivisy ao amin'ny seranam-piaramanidintsika ambanin'ny fepetra napetraky ny crunch capacité izay miha sarotra hatrany. Ny fanalahidy dia ny fanatsarana ny asan'ny hub ary indrindra hanamafisana bebe kokoa ny andraikitry ny seranam-piaramanidina Munich ho vavahady fidirana amin'ny kaontinanta. ”